Alahady 05/07/2015 : Tenin’ Andriamanitra – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Vakiteny voalohany: Bokin’i Ezekiela Mpaminany (Ezek 2, 2-5)
Tamin’izany andro izany, niditra tato anatiko ny Fanahy, sady nampitsangana ahy, ka nandre ny Tompo niteny tamiko aho. Hoy Izy tamiko: “Ry zanak’olona, indro ianao irahiko, ho any amin’ny zanak’i Israely, ho any amin’ireo vahoaka mpiodina izay niodina tamiko, fa efa nanota tamiko, mandrak’androany aza, ireo sy ny razany. Ireo zanaka manao tarehy tsy mahalala menatra sy mafy fo ireo no anirahako anao. Izao no holazainao aminy: Izao no tenin’ny Tompo Andriamanitra. Ka na hihaino izy ireo, na tsy hihaino, – fa taranaka mpiodina izy –dia hahalala fa misy mpaminany eo aminy”.
Vakiteny faha-2: Taratasy faharoan’i Md. Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Kôrinty (2Kôr 12, 7-10)
Ny fahalemeko no ireharehako mba hitoeran’ny herin’i Kristy amiko.
Ry kristianina havana, fandrao mirehareha noho ny halehiben’ireo fanambaràna aho, dia nasiana tsilo tao amin’ny nofoko, dia anjelin’i Satàna hamely tehamaina ahy, mba tsy hireharehako. Ny amin’io dia in-telo aho no nangataka tamin’ny Tompo, mba hanalany an’io amiko, fa izao no navaliny ahy: “Ampy ho anao ny fahasoavako, sady amin’ny fahalemena indrindra no iamparan’ny heriko”. Koa dia vao mainka sitrako aza ny hirehareha amin’ny fahalemeko, mba hitoeran’ny herin’i Kristy amiko. Izany no ifaliako amin’ny fahalemeko, amin’ny fahafaham-baraka, amin’ny fahaterena, amin’ny fanenjehana, amin’ny fahantrana, noho ny amin’i Kristy, satria ny fahalemeko no heriko.
Evanjely Masina nosoratan’i Md Marka (Mk 6, 1-6)
Tamin’izany andro izany, i Jesoa nankany amin’ny tany nahabe Azy, ary nanaraka Azy ny mpianany. Ary rahefa sabata ny andro, dia nampianatra tao amin’ny sinagôga Izy, ka be tamin’izay nihaino Azy no gaga tamin’ny fampianarany sy nanao hoe: “Taiza no nahazoan’Izy io izany rehetra izany ? Fahendrena manao ahoana izao nomena Azy izao, ary ahoana no ahefan’ny tanany izany asa lehibe izany ? Moa tsy io va ilay mpandrafitra, zanak’i Maria, rahalahin’i Jakôba sy i Jôsefa ary i Joda sy i Simôna ? Moa tsy aty amintsika va ny anabaviny ?”. Dia tafintohina taminy izy ireo. Fa hoy i Jesoa taminy: “Tsy misy mpaminany tsy enin-kaja afa-tsy amin’ny taniny sy amin’ny fianakaviany ary amin’ny havany ihany”. Ary tsy nahazo nanao fahagagana akory Izy teo, fa marary vitsivitsy monja no nositraniny tamin’ny fametrahan-tanana, ary gaga Izy noho ny tsy finoan’ireo. Dia nitety ny vohitra manodidina Izy sy ny mpianany.